Ngaba unyulo luya kuyichaphazela njani intengiso yemasheya yaseSpain? | Ezezimali
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo, abaseSpain banokuqeshwa kunye neepoll. Kodwa abatyali mali banomdla kakhulu ekwazini ukuba ziya kuba njani iimpendulo zeemarike zezabelo kwimini elandelayo kuxhomekeke kurhulumente onokuthi wenziwe eSpain kule minyaka mine izayo. Le nto ibangela intshukumo yecala kwi-Ibex 28 ekhokelela ekubeni ihambe ngomtya omxinwa kakhulu phakathi kwamanqaku ayi-9.100 kunye nama-9.600 apho kunzima ukuphuma khona ngoku. Ilinde into enokwenzeka ngeCawa yokugqibela yenyanga yokuvula.
Ezinye iimarike zentengiso zinobuthathaka ngakumbi kunezinye malunga nesigqeba esinokuthi senziwe emva konyulo jikelele kule nyanga. Ngokukodwa, yintoni abaxhomekeke kuyo iintshukumo zikarhulumente kwaye ngabo abalinde into enokwenzeka ngolu suku lonyulo lutsha. Apho kucacisiwe ukuba kunokubakho urhulumente wesinye okanye esinye isibonakaliso kunye nemigaqo-nkqubo yoqoqosho eyahlukileyo phakathi kwabo. Into egcina utyalo-mali oluncinci noluphakathi kulindelo.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ii-equity zaseSpain zixhomekeke kwimeko yeemarike zamasheya zamanye amazwe kwaye le nto inokubaluleka ngakumbi kwikamva ukusukela ngoku. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ngayiphi na imeko, iliso labatyali zimali zentengiso liku 28 A ukwazi ukuba wenzeni. Nokuba uza kuvula izikhundla okanye uzirhoxise Ujongene nemeko engathandekiyo yomdla wakhe kubudlelwane bakhe nehlabathi elihlala linzima lemali.
1 Unyulo: awona macandelo abuthathaka
2 Ummiselo weenkampani zombane
3 Oosokhemisti banikele ingqalelo enkulu
4 Amaqhinga ekufuneka enziwe
5 Imarike yemasheya ithengisa izigidi ezingama-34.000
Unyulo: awona macandelo abuthathaka
Ewe kunjalo, kukho amanye amacandelo aya kuthi alwazi ngakumbi unyulo jikelele kunamanye kwaye oku kubonakala ngo ukwehla kwevolumu yesivumelwano kwiimarike zezabelo. Enye yezona zinto zibalulekileyo yibhanki elinde into enokwenzeka ngalo mhla. Kwimeko ngokubanzi, apho amaxabiso ayo ahlala ekhathazekile ezantsi imeko ngasemva. Ngokwehla kokudodobala kuzo zonke iibhanki ezidweliswe kwimarike yesizwe eqhubekayo kwaye oku kukhokelele ekubeni ixabiso lezabelo zazo libe nomdla ngokungathandabuzekiyo, nangona kukho umngcipheko wokuba ziya kuqhubeka ukwehla kwiintsuku ezizayo.
Ukongeza, asinakho ukulibala impembelelo enkulu yokuba icandelo lebhanki Ukucwangciswa kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ngobunzima obuthile ekungekho elinye icandelo lezamashishini elinalo ngoku. Ngokungafaniyo nento eyenzekayo kwiimarike zesitokhwe esele zelizwekazi elidala. Ngale ndlela, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokujonga kakhulu into eyenzeka nyani ngala maxabiso. Kwelinye icala, bakwimeko ethe-ethe kakhulu kwaye ngelinye lamaxabiso asezantsi kule minyaka idlulileyo. Apho kukho naziphi na iinzame zokunyuka ezingafakwanga ebhlow ngoku kuthengisa ngoku.
Ummiselo weenkampani zombane
Elinye lawona matyala abalulekileyo ngala iinkampani zonikezelo lokukhanya ngabona banomdla wokwazi umqondiso wombala worhulumente olandelayo kwilizwe lethu. Kufuneka kukhunjulwe ukuba eli candelo loshishino libuthathaka kakhulu kumanyathelo anokuthathwa sisigqeba esilandelayo kuba kuxhomekeke kubo ukuba bangahlala njengoko benjalo okanye benzakaliswe ngumdla wecandelo labo. Ngelixa iziko lasekunene leziko likuthanda ngakumbi ukukhuthaza inkululeko ngakumbi kwicandelo, ukuphelisa inkxaso-mali kunye nokususwa kwezithintelo zokungena. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba imeko enqabileyo ngakumbi iya kwenziwa kwiinkampani zombane eziya kuthi ziphinde zicingisise ngemodeli yazo yeshishini. Into enokukhokelela kwixabiso lezabelo zalo ukwehla kwiiveki ezizayo.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kwenye indawo yezopolitiko impendulo yezi nkampani ibithandeka kakhulu ukusukela ngehlobo elidlulileyo. Ngokunyuka kweenkampani kwicandelo phantse i-30% kwaye zikhokelele ezinye zexabiso lazo kwimeko yokunyuka simahla. Ngamanye amagama, ngaphandle kokuphikiswa okubalulekileyo ngaphambili kwaye kunokubathatha baye nakumanqanaba aphezulu kwixabiso labo kwiimarike zezabelo. Njengakwimeko ezithile ze-Iberdrola, i-Endesa okanye i-Naturgy. Nangona kuyinyani ukuba babonisa ukudinwa okuthile kwiiseshoni zokugqibela zokurhweba. Ngamandla amancinci okuqhubeka nokunyuka kunye nevolumu yokurhweba esezantsi kunangaphambili.
Oosokhemisti banikele ingqalelo enkulu
Elinye icandelo elithandabuzekayo eliza kuthi lazi kakuhle ngolonyulo ngusokhemesti, oza kufumana izikhundla ngezindululo zonyulo, zombini iPSOE kunye neCiudadanos. Ngelixa ngokuchaseneyo, iya kuba kwimeko engathandekiyo kunye nezinye izindululo zonyulo ezikhuthaza ukuphelisa ukufikelela simahla kukhathalelo lwempilo. Ukuza kuthi ga ngoku kwezi ntsuku kubonisa ukungazinzi kunamacandelo emarike yemasheya aseleyo ebusweni bento enokwenzeka ngomhla wolonyulo. Ayothusi into yokuba iyaqapheleka ukuba iya kuba yenye yezona zihamba emva kwe-28 A, ngandlela thile.
Ngelixa kwelinye icala, kuya kuhlala kusaziwa ukuba zizakuphendula zithini iinkampani zeoyile kulo msitho wezopolitiko ngaphambi kwesindululo semibutho ethile yezopolitiko. setha irhafu yedizili Ukutshatisa ixabiso nelepetroli. Oko ngokuqinisekileyo kuya kugqiba ukuba ixabiso lezabelo zakho liya kwelinye icala okanye kwelinye isikali. Ukuchaphazela enye yeetshipsi ezinkulu eziluhlaza zesizwe ezifana neRepsol, ngoku lelinye lamaxabiso acetyiswayo yinxalenye enkulu yabahlalutyi bezemali. Ngegunya lokuthenga izabelo zabo kwixesha eliphakathi nelide. Kwelinye icala, ukuvelisa enye yezona nzuzo zesahlulo siphezulu kwimarike, ngomdla ophakathi we-6%.
Amaqhinga ekufuneka enziwe
Nokuba yeyiphi na indlela, eyona nto isengqiqweni ukuyenza kwezi ntsuku kukulinda ukuba kwenzeke ntoni ngomhla wokhetho kulo Epreli. Lo nto asinakubanjiswa kwezinye zezenzo ezinokuthi zisabele kakubi kolu nyulo. Ekupheleni kosuku zimbalwa kakhulu iintsuku zokwazi iziphumo kwaye akufanelekanga ukubeka emngciphekweni imali yethu ekhoyo yotyalo-mali. Nje ukuba ukuthandabuza okubalulekileyo kusonjululwe, khetha ukuvula izikhundla kweyona ndawo intle yecandelo lezentengiso ukusukela ngoMeyi.
Ngelixa kwelinye icala, kubonakala ngathi imarike yestokhwe saseSpain iza kuhamba notshintsho olugqithisileyo kwezi ntsuku ngaphambi konyulo. Ngenxa yoko, ukusebenza kuwo onke amathuba okuba kungabinangeniso kuwo nawaphi na amacandelo eshishini elithengiswa esidlangalaleni. Akufanelekanga, ke ngoko, ukubeka umngcipheko ekubeni kunjalo akulunganga kakhulu ukuvula izikhundla kule mizuzu okoko kukho umngcipheko wokulahleka kwemali kunokuwina. Le yinyani ebekwe kubatyali zimali abancinci nabaphakathi abangaziyo ukuba mabenze ntoni ngalo mzuzu kanye. Apho ukungaqiniseki kweemarike zezabelo kuyinyani ebeka iimeko zayo kwiimarike zesitokhwe. Ngaphandle kwenyani yokuba iindibano ezithile zinokuveliswa kumaxabiso ezabelo zeenkampani ezidweliswe kwimarike yemasheya.
Imarike yemasheya ithengisa izigidi ezingama-34.000
I-Spanish Stock Exchange ithengise nge-34.680 yezigidi ze-euro ngee-Matshi, 7,2% ngaphezulu kunangoFebruwari kunye nama-29,6% ngaphantsi kwenyanga enye yonyaka ongaphambili. Inani lezorhwebo likhule nge-12,5% ​​xa kuthelekiswa noFebruwari, ukuya kuthi ga kwi-3,1 yezigidi, i-17,8% ingaphantsi kuka-Matshi 2018. Kwicandelo le-fund-exchangeed traded (ETF), i-137,8 yezigidi zeerandi zithengisiwe, i-8,7% ngaphezulu kunangoFebruwari kwaye I-38,6% ingaphantsi kuno-Matshi 2018. Inani lothethathethwano ibiyi-5.381, oko kuthetha ukunyuka nge-16,3% xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo kunye nokuhla kwe-34,2, 2018% xa kuthelekiswa noMatshi wonyaka ophelileyo, ngo-XNUMX.
Ngokumalunga nemarike yengeniso esisigxina, kufanele kuqatshelwe ukuba ngeli xesha ligcina inqanaba eliphezulu lomsebenzi. Inkqubo ye- Umthamo opheleleyo Kwiinyanga ezintathu zokuqala zonyaka ikhule nge-88,9%, emva kokubhalisa uthethathethwano lwe-38.632 yezigidi zeerandi ngenyanga kaMatshi, i-109,9% ngaphezulu kunenyanga enye ka-2018. Ukongeza, imiba eyamkelweyo kurhwebo inyuke nge-13,8% ukusukela ukuqala konyaka kunye nemali eseleyo inyuke nge-3,5%. Ekuchongeni indlela ezenziwa ngayo iimarike zaseSpain phambi komhla obalulekileyo wonyulo kulo Epreli. Ngelixa okokugqibela, kufanele kuqatshelwe ukuba indawo evulekileyo yeseti yeziphumo zezemali inyuke ngeli xesha nge-2,2% xa kuthelekiswa kwinyanga enye yonyaka ophelileyo. Inani lothethathethwano ibiyi-5.381, oko kuthetha ukuba inyuke nge-16,3% xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo kunye nokuhla kwe-34,2% xa kuthelekiswa noMatshi 2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba unyulo luya kuyichaphazela njani intengiso yemasheya yaseSpain?
Senze ntoni ngokulondoloza kwethu ngePasika?